China Wholesale kwakavharwa nenyama Sisal muvare romukova rusvingo pakona katsi muti scratching katsi romukova Manufacturer uye mutengesi | J & E
2 Pet (Tree / Tower / muvare)
3 Pet Mumupfekero
Musashamisika Dc Disney Pet Products
Wholesale kwakavharwa nenyama Sisal muvare romukova rusvingo pakona katsi muti scratching katsi romukova
OverviewQuick DetailsType: Pet ToysToys Type: Interactive ToysMaterial: Sisal ClothApplication: CatsFeature: Eco-FriendlyPlace pamusoro Origin: Zhejiang, ChinaBrand N ...
Good Quality, basa rakanaka, mutengo wakanaka uye yakakwirira kunyatsoshanda muri bhizimisi redu musimboti. Base pamusoro, zvigadzirwa edu chatengeswa kuNorth America, Europe, Korea uye Japan .Moreover, tave mukurumbira wakanaka mune izvi kumusika. Pakuumba zvakawanda bhizimisi redu vatengi akwegura uye itsva, isu makasimbisa kwedu sourcing uye magadzirirwo dhipatimendi itsva dzinovaraidza zvinhu zuva nezuva.
katsi scratching romukova
katsi muti scratching romukova
Single kukura pasuru:
Single kwakakomba uremu:
katsi muti dzaizara pedyo katoni
Quantity (Set) 1 - 1 > 1
Est. Time (mazuva) 15 Kuti nekambani
Izvi Latest Cat scratching Muti ndiyo musha wokupedzisira chero katsi, Chine scratching, perching, kudzingirira, kukwira, kuongorora, kuzorora uye justplain kunonakidza pano zvose, The Dete carpeted pamusoro kunopa imwe comfort.The sepombi vari wakaputirwa pamwe Sisal namabote enyu dzinovaraidza kuti muvare uye kutamba navo. The yakasimba garo kunodzivisa chero kuzunguza saka zvinokuchengetedzai pamusoro chero sandara penyika saka haufaniri kunetseka akakuvadza katsi wako; The Stylish katsi muti zvainoitawo kugara yakarongedzwa yenyu.
zvinhu Sisal Cloth
Delivery nguva Mazuva 35 pashure agamuchira dhipoziti
1.Do une unganidza?
♦ Hongu, tinogona anotakura muna 1 zuva.
2.Did iwe tengesa muna Amazon?
♦ Hongu, tinogona chikepe FBA yokuchengetera zvinhu.
3.Can iwe customized ruvara?
4.We vanoda kugadzira pasuru yedu, OK?
♦ Zvechokwadi, giftbox, mhoni kadhi, PP bhegi kana zvimwe iwe wakaita?
5.How iwe kuwedzera Logo yedu?
♦ By esiriki printe, kana kusona kana zvimwe unoda
nayo 6.Is shandika kusanganisa kuruboshwe ruoko & kurudyi kana vazhinji muenzaniso?
7.Can iwe sanganisa mienzaniso yakawanda kuti yakatarwa?
♦ Hongu, izvo mhando here sezvinoita kuti musanganiswa?
Previous: China Wholesale itsva katsi chitoyi Christmas muti chemarata katsi Scratcher makadhibhokisi
Next: Portable Folding Safety zvakapoteredza Fence Guard Mesh Pet Magic Gate Mesh Dog Safety Gate
Amazon Hot Sale Cat Toy Corrugate scratching Bo ...
Cat Toys Furniture Protection Cat scratching Pa ...
High yepamusoro climb katsi muti Scratcher Sisal ...
Wholesale katsi muti kukwira matoyi Sisal jira CA ...
Wholesale Pet Products Cat scratching Post Sisa ...
yedu evanhu vezvenhau
RM1003, chuangyi sheji building, 508 TaiAn Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo, China, 315100
Interzoo - nemugwagwa wakanaka nokuda zvinhu fo ...
Master Grooming Tools, Pet Cleaning & Mumupfekero Products , Pet Mumupfekero , Dog Mumupfekero , Pet Mumupfekero Comb , Pet Mumupfekero Glove ,